Afka Ingiriiska (; ) waa luuqad looga hadlo dhowr wadan waxeeyna tahay luqod caalamka aad looga xishmeeyo. Asal ahaan Afka ingiriiska wuxuu ka yimi luqadda Afka Laatiiniga, waxaana lagu alifey wadanka Ingiriiska. Fiditaanka uu Afka ingiriiska ugu fidey dunida waxaa sabab u ah gumeysigii Ingiriisku uu ku gumeystey dunida barkeeda kala bar. Mar walba oo uu wadan gumeysto, Ingiriisku wuxuu ka dhigi jirey afkiisa afka dawladda iyo tan barida. Guud ahaan, luuqada ingiriiska waxaa si heersare ah lagaga hadlaa 67 wadan, 27 deegaan iyo maamul, Ururo caalamiga ah sida: Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Commonwealth of Nations, Golaha Yurub, GUAM Organization for Democracy and Economic Development, International Criminal Court, International Olympic Committee, International Organization for Standardization, Ururka NATO, NAFTA, Organization of American States, Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisation of Islamic Cooperation, OPEC, Pacific Islands Forum, UKUSA Agreement, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Economic Community, South Asian Association for Regional Cooperation, Turkic Council, Economic Cooperation Organization iyo meelo badan oo kale.
Xaquuqda sawirka: Tristan Nitot
The Eiffel Tower ee ku taala magaalada Baariis waa taalo ka mid ah kuwa ugu caansan aduunka ee astaanta u ah magaalada Baariis iyo guud ahaan wadanka Faransiiska.
Portal:Yurub/Qof xul ah/1
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Yurub&oldid=166783"
Last edited on 18 Febraayo 2017, at 10:49
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 18 Febraayo 2017, marka ee eheed 10:49.